किन आउँछ आ'त्मह'त्या गर्ने सोच ? यस्ता हुन्छन संकेतहरु बेवास्ता नगरौ !
आ’त्मह’त्या आफैमा मानसिक रोग होइन । यसका कारणहरुमा डिप्रेशन, बाइपोलर डिसअर्डर, पर्सनालिटी डिसअर्डर, अचानक कुनै गम्भीर घटनाको प्रभाव तथा तनावहरु पर्छन् । यस्ता समस्याहरुबाट गुज्रिरहेका मानिसहरु उदास हुन्छन् । र उनीहरुको मनमा हरेक पल नकारात्मक सोच पैदा भइरहेको हुन्छ । उनीहरु यसै सिलसिलामा कहिले काँही आफूलाई निकै एक्लो महसुस गर्छन् र मनमा आ’त्मह’त्याको बारेमा सोच्न पुग्छन् ।
यस्ता संकेतले दिन्छ चेतावनी
आ’त्मह’त्या जस्तो अत्यन्तै भयानक कदम कुनै पनि व्यक्तिले अचानक उठाउन सक्दैन । यसभन्दा अगाडि उक्त व्यक्तिमा केही संकेतहरु देखापर्छन् । जस्तो कि बारम्बार रिसाउने, सधैँ उदास हुने, मुड स्विंग हुने, भविष्यलाई लिएर अत्यधिक शसंकित रहने, निन्द्रा नलाग्ने हुन्छ । यस्तो समयमा उनीहरु निकै मानसिक उतार चढावको महसुस गरिरहेका हुन्छन् ।
गम्भीर तनाव र डिप्रेशनबीच पनि कुनै व्यक्ति अचानक शान्त हुन थाल्यो भने त्यो व्यक्ति कुनै गलत निर्णयमा पुगिसकेको भन्ने स्पष्ट हुन्छ । त्यस्ता व्यक्तिहरु एक्लै बस्न रुचाउने, कुनै पनि सामाजिक गतिविधिबाट भाग्ने र कुनै पनि काममा दिलचस्पी नराख्ने गर्छन् । आ’त्मह’त्या गर्ने सोच आएपछि कुनै उक्त व्यक्तिमा अचानक परिवर्तन आएको अनुभव गर्न सकिन्छ ।
विश्वभरका आ’त्मह’त्याका घटनाहरुलाई आधार मान्ने हो भने आ’त्मह’त्या गर्ने सोचमा पुगेका कतिपयले विभिन्न तयारी समेत गरेका देखिन्छन् । जस्तै, परिवारलाई आफ्नो व्यवसायमा सामेल गराउने, आफूपछिको हकदार तयार गर्ने, आ’त्मह’त्याको बारेमा चिठी लेख्ने, ब’न्दुक वा वि’ष जस्ता पदार्थ खोज्ने जस्ता हर्कतहरु गर्छन् । आ’त्मह’त्या गर्ने ५० देखि ७० प्रतिशत मानिसहरु आफन्तलाई यस विषयमा पूर्व जानकारी गराउँछन् ।
के आ’त्मह’त्या रोक्न सकिन्छ ?
पछिल्लो समय विश्वभर नै आ’त्मह’त्याको दर बढ्दै गएको पाइन्छ । त्यसले यसबारेमा सजगता अपनाउन अत्यन्तै जरुरी छ ।
आ’त्मह’त्यालाई निर्मुल पार्न कठिन छ । तर आ’त्मह’त्या गर्ने सोचलाई भने हटाउन सकिन्छ । अनुसन्धानका अनुसार आ’त्मह’त्या रोक्नका लागि सबैभन्दा राम्रो उपायमा डिप्रेशनको समयमा नै उपचार गर्नु नै हो ।
सामान्यतयाः मानिसहरु मस्तिष्कसँग जोडिएका समस्याहरुलाई लिएर अस्पताल जानुलाई असहजतासँग जोड्ने गर्छन् । उनीहरुलाई डिप्रेशन भन्ने कुरा सामान्य हो र यसबाट समयमै उपचार गरे बच्न सकिन्छ भन्ने कुरा थाहा हुँदैन ।
आफूमा सधैँ नकारात्मक सोच आउने, आफूले आफूलाई नै चोट पुर्याउने जस्ता सोच आउन थाल्यो भने तुरुन्तै डाक्टरसँग सल्लाह लिनुपर्छ । साथै, आफ्ना नजिकका साथी, परिवारलाई आफ्ना हरेक भावनाहरु सेयर गर्ने गर्नुपर्छ ।
डिप्रेशन भएको छ भने, एक्लै बस्दै नबस्नुस् । आफ्ना परिवारका सदस्य तथा साथीभाईसँग लगातार सम्पर्कमा रहने गर्नुस् । आफ्ना समस्याको बारेमा खुलेर कुरा गर्नुस् । एक्लोपनबाट बच्नको लागि किताब पढ्नुस्, निन्द्रा पुर्याउनुस्, म’द्यपान तथा धु’म्रपान नगर्नुस् । र, मानसिक स्वास्थ्यका लागि मनोचिकित्सकको सहयोग लिनुस्